२ वर्षपछि भारतको बिजुली चाहिँदैन : कुलमान मोबाइलमा १० हजार खर्च गर्ने परिवारले बिजुलीको १-२ हजार बिलमा किन टाउको दुखाउने ? – Kite Sansar
२ वर्षपछि भारतको बिजुली चाहिँदैन : कुलमान मोबाइलमा १० हजार खर्च गर्ने परिवारले बिजुलीको १-२ हजार बिलमा किन टाउको दुखाउने ?
२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही वर्ष अगाडिसम्म अत्यधिक घाटा खाने संस्थानमा गनिन्थ्यो । अर्कोतर्फ १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेर आलोचित पनि थियो ।
तर, कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएपछि यसको भाग्य फेरियो । कुलमानले व्यवस्थापकीय कौशल देखाउँदै देशभरबाट लोडसेडिङ मात्रै हटाएनन्, प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगे । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ७ अर्बभन्दा बढी त नाफा नै कमाएको छ ।
यद्यपि, अहिले प्राधिकरणसामु नयाँ चुनौतीहरू छन् । पहिले बिजुली अपुग भएर समस्या थियो भने अब मागभन्दा बढी उत्पादनलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले कुलमानले लगातार विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, यही बेला प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउने चर्चा पनि भइरहेको छ ।
घोषित लोडसेडिङ हटे पनि झ्याप–झ्याप लाइन काटिने समस्याले पनि उपभोक्तालाई दिक्क बनाएको छ । यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा रहेर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग गरेको कुराकानी:
यो लोडसेडिङ होइन । हामीलाई वितरण गर्न बिजुली नपुगेर लाइन काटेका होइनौं । हामीसँग माग जति बढे पनि वितरण गर्न पर्याप्त बिजुली छ
यसैगरी थ्रि–फेजको टीओडी (स्मार्ट) मिटरहरूमा रातिको महसुल कम गर्ने, दिउँसोको सामान्य तहमा मूल्य राख्ने र पिक आवरमा अलि महँगो गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा हामीलाई बिजुलीका माग व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ भने रातिको समयमा पनि बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसले बिजुली खेर जाने समयममा माग बढाउन सहयोग नै हुन्छ ।
अब त सिजनल महसुल पनि हुन सक्छ । अब वर्षायाममा बढी बिजुली हुन्छ भनेर त्यो समयमा महसुल अलि घटाउने गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भन्दा कम महसुल राखियो भने खपत बढ्न सक्छ । तर, घरेलु ग्राहककोमा यो तत्काल सम्भव हुन्न किनभने स्मार्ट मिटर जोड्न भर्खर तयारी थालिएको छ ।
सरकारले बिजुली खपत बढाउन अहिलेसम्म कुनै प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको छैन, तपाईंहरूले महसुल दरलाई वैज्ञानिक बनाएर मात्रै पर्याप्त हुन्छ र ?
अब सरकारले पनि धेरै नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामी अहिले विद्युतीय सवारी भनिरहेका छौं, अझ यसमा हस्तक्षेप गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय सवारी हाम्रा लागि निकै राम्रो हुन्छ । किनभने अधिकतम विद्युतीय सवारी राति चार्ज हुन्छ । अहिले पनि विद्युतीय सवारी राति चार्ज गर्दा ३.७० रुपैयाँ महसुल छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको स्पेयर्स पार्ट्समा, ब्याट्रीमा भन्सार निःशुल्क गरिदिनेदेखि विद्युतीय सवारी ल्याउन के–के गर्न सकिन्छ, त्यो सरकारले नीति बनाएरै गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि नयाँ उद्योगहरू आइरहेका छन् । प्रसारणलाइनको सीमितताका कारणले मागअनुसार दिन सकेका छैनौं । होङ्सी सिमेन्टलाई नै ६० मेगावाट दिन सकेका छैनौं । यस्ता समस्यालाई चिर्ने गरी नीतिगत रूपमै इन्टरभेन्सन गरेर सरकारले जहाँ–जहाँ उद्योग आउँछ त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।
नेपालको बिजुली दक्षिण एसियाकै महँगो भनिन्छ । माग र आपूर्ति बढेपछि मूल्य घट्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
नेपालको बिजुली दक्षिण एसियामै महँगो भन्ने कुरा सत्य होइन । हामीले भुटानसँग तुलना गरेर हुँदैन । उहाँहरूसँग ‘सरप्लस’ बिजुली धेरै छ । भारतलाई बिजुली बेचेर त्यसबाट जनतालाई ‘सब्सिडाइज’ गरेर महसुल दिइएको छ । धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू पनि उहाँहरूले अनुदानमा बनाउनुभएको छ ।
बंगलादेशको पनि तुलना गर्न मिल्दैन, त्यहाँ उच्च अनुदान छ । उहाँहरूले निजी प्रवद्र्धकबाट प्रतियुनिट १० सेन्टसम्ममा किन्नुभएको छ, भारतसँग साढे ५ सेन्टसम्म किन्नुभएको छ । तर, महसुलमा सहुलियत दिनुभएको छ । त्यति हँदाहुँदै पनि प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ जति छँदैछ । भारतमा राज्यपिच्छे महसुल फरक छ, त्यहाँ यो राजनीतिक ‘इस्यु’ नै बन्छ ।
हाम्रो महसुलले प्राधिकरणलाई नाफा छैन, खालि ‘ब्रेक इभन’मा देखिन्छौं । हामीले अरू विभिन्न स्रोतबाट आउने पैसाले नाफा कमाएका छौं । ‘अपरेसनल इफिसियन्सी’ बढाएकाले मात्रै हामी नाफामा जान सकेका हौं । हामीले चुहावट घटायौं, खर्च घटायौं, ब्याजबाट कमाएका छौं, सिस्टर कम्पनीबाट लाभांस कमाएका छौं । सबै व्यवस्थापन मिलाएर थोरै नाफा गर्न सफल भएका हौं ।
प्राधिकरणले विद्युत् किनेको मूल्य त पाउनुपर्‍यो नि । हामीलाई औसत विद्युत् खरिद मूल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ पर्छ । तर, कतै ५ रुपैयाँमा पनि बिजुली बेचिरहेका छौं । तल्लो तहमा खपत गर्नेलाई त ३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमै दिइरहेका छौं । उद्योगलाई रातिको ६ घण्टाको महसुल ४.१५ रुपैयाँ छ । औसतमा ७ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली बेचिरहेका छौं । प्राधिकरणले औसतमा बिजुली खरिद गर्न नै त्यतिबराबरकै रकम खर्चिनुपर्छ । अझ योभन्दा बढी पर्छ ।
बिहारको ल्याउँदा १० रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्छ, खिम्तीको १५ रुपैयाँ पर्छ । त्यसैले सामान्यमा महसुल महँगो हैन ।
तर, दीर्घकालमा नेपालको बिजुली निकै सस्तो दरमा आउँछ । किनभने ३० वर्षपछि सबै प्रोजेक्ट ‘शून्य’ मूल्यमै सरकारको स्वामित्वमा आउनेछन् । त्यसपछि त बिजुली किनिरहनु पर्दैन । त्यसको सञ्चालन गर्न एक डेढ रुपैयाँ पर्ला । त्यसपछि जति मूल्य जति घटाए पनि हुन्छ ।
अरू देशमा जस्तै सरकारले महसुलमा अनुदान दिन त सक्ला नि ?
अहिले हामीलाई बिजुलीको माग बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले सुरुमा त महशुलको स्ल्याब नै वैज्ञानिक बनाउने हो । त्यसका लागि योजना बनेको छ । अब बढी खपत गर्नेको केही महसुल घट्छ । खपत बढाउने गरी नै महशुल संरचना बनाउँछौं । अब हामी बढी बिजुली प्रयोग गर्नेले कम तिर्नुपरोस् भन्ने सोचेरै अघि बढेका छौं । तल्लो तहका ग्राहकलाई पनि महशुल बढाएर मारमा पार्दैनौं ।
प्राधिकरणले वर्षमा ७ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउन थालेको छ, अझै बढि नाफा कमाउने सोच हो ?
हेर्नुस्, हामीसँग ४ खर्बको सम्पत्ति छ, तर २ खर्बभन्दा बढीको ऋण पनि छ । त्यसको ब्याज तिर्नपर्छ । सरकारले प्रसारणलाइनको विकासका लागि दिएको ऋण पनि ५ प्रतिशत ब्याजमा छ । र, प्राधिकरणको दीर्घकालीन दायित्व हेर्नुस्, १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्, पेन्सन खाने मात्रै ५–६ हजार छन् । कर्मचारी त पाल्नुपर्‍यो नि !
यो सबै गरेर पनि हामीले केही नाफा कमाएका छौं । यो किन जरुरी छ त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । सँधै प्राधिकरणले सरकारबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कि प्राधिकरण आफै लगानी गर्न सक्ने बन्ने ?
हामीले ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा इक्विटी लगानी त गर्नुपर्‍यो। यत्रो धेरै लाइनहरू बनाइरहेका छौं । सबस्टेसनहरू बनाइरहेका छौं । त्यसका लागि लगानी कहाँबाट आउँछ ? सँधै प्राधिकरण सरकारकै मुख ताकिरहने ?सरकारले दिएन भने के गर्ने ? प्राधिकरण घाटामा गयो भने त विद्युत क्षेत्र नै धरासायी हुन्छ नि ।
अहिले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीसँग एक खर्ब हाराहारी नगद नै छ, हामीसँग त्यति रकम हुन्थ्यो भने त कति वटा जलविद्युत आयोजना बन्न सक्थ्यो ? एउटा निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वर्षमा १५–२० अर्ब नाफा कमाउँछ । अनि प्राधिकरणले नाफा नै गर्न नहुने ? हामीले कमाएको त यही माटोमा विकासका लागि लगानी गर्ने हो नि ! भएको नाफा देशकै विकासमा खर्चिने हो ।
हामी ४ खर्ब लगानी गर्दा ७ अर्ब नाफा कमाइरहेका छौ । त्यो भनेको करिब डेढ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि हामीले महुशुलबाट लिएको नाफा हैन । भएको पैसा पनि कता महंगो ब्याज पाइन्छ भनी खोजी–खोजी राखेर कमाएको हो । हामीले नाफा कमाएर कर्मचारीलाई बाँड्ने होइन ।
अहिले दूरसञ्चार कम्पनीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले पैसा दिनुपरेको छ ? उसको लगानी आफैंले गर्छ । प्राधिकरण पनि त्यस्तै आत्मनिर्भर भयो भने हामीलाई दिने पैसा देशकै शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारमा जाला ।
त्यसैले जसले प्राधिकरण घाटामै बस्नुपर्छ भन्छ, उसको नियत विद्युत क्षेत्र सँधै खाडलमै फसोस् भन्ने हो । प्राधिकरण नै टाट पल्टियो भने त ५ सय मेगावाटको पीपीए गरे पनि बैंकले प्रवद्र्धकलाई पत्याउँदैन । त्यसैले प्राधिकरण बलियो हुँदा त सबैलाई फाइदा नै छ । प्राधिकरणलाई वर्षमा २० अर्ब नाफा होस् न, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना त प्राधिकरणले नै बनाइदिन सक्छ ।
हामीमा बिजुलीको बिल देखेपछि गुनासो गर्ने प्रवत्ति बस्यो । एउटा उदहारण हेरौं, अहिले घरमा भएका प्रायः सबै व्यक्तिले फोन बोक्छन् । फोनमा केही नगर्दा पनि औसतमा एक जनाले महिनामा एक हजार रुपैयाँ खर्च गर्लान् । इन्टरनेटमा त्यसैगरी खर्च हुन्छ । टेलिभिजन सेवामा पनि खर्च छ । ५ जना सदस्य भएको परिवारले यस्तो दूरसञ्चार सम्बद्ध सेवामा महिनामा १० हजारसम्म खर्च गर्छन् ।
तर, तीनै विद्युतीय उपकरणको न्युनतम् पूर्वाधारका रूपमारहेको बिजुलीको बिलमा एक–दुई हजार खर्च गर्नुपर्दा त्यो परिवारलाई ज्वरो नै आउँछ । १० मिनेट बत्ती नहुँदा कति अप्ठेरो पर्छ भन्ने हामीले भोगेकै हौं । बिजुलीमा महसुल बढ्दा पनिरुपैयाँमा हैन, पैसामा बढ्छ । र पनि विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई मनन गर्नुपर्छ ।
तपाईं अब प्राधिकरणमा करिब ८ महिनामात्रै रहनुहुनेछ । तपाइँ आउँदाको अवस्थामा रहेको प्रमुख चुनौतीहरू पार लागे, जाने समय नजिकिँदै गर्दा कस्ता कुरालाई आफ्ना चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?
हिजो हामी जनतालाई जतिसक्दो कम बिजुली खपत गर्नुस् भन्थ्यौं, अब हामी जतिसक्दो बढी खपत गर्नुस् भन्दैछौं । हिजो लोडसेडिङ हटाउने चुनौती थियो, अब खेर जाने बिजुली व्यवस्थापन गर्ने चुनौती मुख्य हो । फेरि सुख्खायाममा त विजली आयात गर्नैपर्ने सत्य पनि जीवितै छ ।
तर, हामीलाई आयातको चिन्ता छैन, वर्षामा बिजुली खेर जाला भन्ने बढी चिन्ता छ । बिजुली आयातले त के भयो र ? अर्थतन्त्रलाई धेरै फाइदा गरिरहेको छ । आयात गरेर खपत गरेको बिजुलीको उत्पादकत्व १० गुणा बढी हुन सक्छ ।
किनकी वर्षायाममा ठूलो परिमाणको बिजुली भारत जान्छ । देशभित्रै त्यो बिजुली खपत गर्ने हो भने ‘सिजनल डिमान्ड’ सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी तवरबाटै नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ ।
सुनको मूल्य निरन्तर उकालो, प्रतितोला ७६ हजार पुग्यो, चाँदी ९ सय २०, अझै बढ्ने संकेत